Eo am-pametrahana ny taolam-by vy misy trano misy rihana marobe ao amin'ny seranam-piaramanidina Shenzhen
Tavoahangy vy misy ny tetezana mihoatra ny mpandeha an-tongotra
Ny trano fanatobiana vy dia matetika vita amin'ny andian-tsarimihetsika vy, ao anatin'izany ny tsanganana vy, ny tadin'ny vy, ny purlin sns. Ireo singa lehibe ireo dia mandrafitra ny firafitry ny entana ao amin'ny trano fanatobiana entana. Noho ny lanjany maivana sy ny fanamboarana mora dia misy ...
Hevitra manan-danja amin'ny famolavolana atrikasa fananganana vy
Raha mikasika ny famolavolana atrikasa fananganana vy dia tokony hisy ny fandinihana mba hamoronana endrika tsara indrindra. Ny fiheverana ao anatin'izany dia tsy voafetra ho: ● Tsy azo antoka: hisorohana ny fidinan'ny rano mando avy any ivelany mankany ...
Ireo karazana fitaovana vita amin'ny vy
Kavina vy-manganese: ny akora simika lehibe dia ny vy, ny karbaona ary ny manganese. Ireo dia antsoina matetika hoe vy vy malefaka na vy vy. Avo ny hery sy ny fikojakojana, ary noho izany dia be mpampiasa ny fananana toekarena. Ny sokajy malaza eo amin'ity sokajy ity dia ny ASTM kilasy A36. T ...